FAMINDRANA PASITORA : Nitokona ireo kristianina tao amin’ny FLM Voajanahary
Lasa tranga miverimberina eo anivon’ny fiangonana Loterana tato ho ato ny fanoherana famindrana Pasitora. 19 décembre 2016
Taorian’ny tranga tao Andranomanelatra vao tsy ela akory izay, dia raikitra indray
ny disadisa eo amin’ny kristianina Loterana ao amin’ny fiangonana Voajanahary-Antsirabe.
Raha ny fanazavana nomen’ireo kristianina dia olona vitsivitsy nanao taratasy nangataka antsokosoko ny hamindrana ny mpitandrina, ka voalaza fa nangalarin’izy ireo ny sonian’ilay mpitandrina nanaovany ilay taratasy. Tsy nisy nanam-po ny krisitianina fa taitra rehefa tonga ny taratasy avy any amin’ny Synodam-
paritany nilaza ny fifindran-toeran’ilay mpitandrina ka raikitra ny savorovoro sy ny fitakiana ny tsy handehanan’ny mpitandrina.
Voalaza fa efa nisy ny fifampidinihana teo anivon’ny tompon’andraikitry ny Synodam-paritany teo amin’ireo krisitianina ihany saingy nilaza ny tsy hihemotra intsony ny tompon’andraikitra ary hanohitra hatramin’ny farany ireo mpino.
Amin’izao fotoana dia nametrahan’ireo kristianina sora-baventy ny eo am-piangonana ary intelo alahady izay dia tsy nety nanao rakitra intsony izy ireo fa mivoaka ny fiangonana ary any ivelany no tantazina ny rakitra ka olon-kafa no mitantana ny vola satria voalazan’izy ireo fa ampahan’ny tao amin’ny komitim-piangonana no nanao ilay taratasy hosoka no fototry ny olana.
Raha ny re dia tokony hiala ao an-toerana mialoha ny Noely ilay pasitora ao ankehitriny saingy nambaran’ireo krisitianina fa tsy hilefitra izy ireo ka dia ho hita eo ny tohiny.
Raha ny nambaran’izy ireo dia antony roa no tokony hisian’ny famindran-toerana mpitandrina dia mety ny fisian’ny disadisa ka ny mpino no mangataka ny hanesorana azy, na ilay mpitandrina no mangataka fifidran-toerana, kanefa dia tsy izany no nitranga satria dia taratasy hosoka no namindrana toerana ilay mpitandrina ao amin’izao fotoana.